Alahadin’ny Sampana Sekoly Alahady 2018. – FJKM
Alahady 09 Desambra 2018
« Mifalia amin’ny fitiavan’ny Tompo »
1-Hira faneva 50 Taona FJKM
3-Fiderana an’ Andriamanitra :Salamo 8
Vakiteny: Joela 2.21-27 / Lio 10.21-24 / 2 Kor 13. 5-12
5-Vavaka fiaikenkeloka (setrin’ny Tenin’ Andriamanitra
6-Teny famelankeloka: Jer 31.1-3/Sal 32.1-2
8-Filazana ny Raharahan’ny Fiangonana :
Tatitra/Fizarana diplaoma na vokatra
9-Rakitra . Hira : 776,778
Fanolorana ny Rakitra . Hira 443.1,2
Mihevitra ny olony Andriamanitra
Ny anarana hoe: Joela dia midika hoe: « mandrakizay Andriamanitra « . io anarana io dia manambara indrindra ny hafatra nomen’ny Tompo tamin’ny mpaminany hoe : tariho ny Zanak’ Israely hahafantatra sy ho resy lahatra fa Izaho no Andriamanitra mandrakizay ka na inona na inona zavatra manjo ny olona dia tsy hohadinoin’ny Tompo velovely izany . Araka izany àry , nisy tokoa ny zava-nanjo ny Zanak’ Israely (jereo ny toko 1) noho ny fahadisoany sy ny fahotany teo anatrehan’ Andriamanitra kanefa aoka ho ao an-tsain’ny olon’ny olona mandrakariva fa:
1-Mivonona hanonitra ny rava Izy
2-Ataovy ho zava-dehibe ny fifandraisana Aminy
Ry havana malala
Ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompontsika
Ny Filoha sy ny Birao ary ny Tonian’ny Sampana Sekoly Alahady Foibe no mamangy sy mampahery antsika rehetra Mpitandrina,Biraon’ny Sampana Sekoly Alahady isan’ambaratongan-drafitra sy ny Mpampianatra ary ny mpianatra Sekoly Alahady rehetra amin’izao Alahadin’ny Sampana Sekoly Alahady izao .
Isaorantsika Andriamanitra noho ny fitahiany sy fitantanany antsika ka nahafahantsika nanatanteraka ireo sahan’asa samihafa nanirahany antsika « hanao ho mpianatra ny firenena rehetra » na teto anivon’ny Sampana Sekoly Alahady Foibe izany,na teo anivon’ny Synodamparitany ary indrindra tany amin’ny isam-pitandremana misy antsika . Ampaherezina hatrany isika mba hiseho tokoa fa isika dia « Sekoly Alahady miaina ny Tenin’ Andriamanitra sady mijoro ho vavolombelon’i Jesoa Kristy »
Ity Alahady ity no nomen’ ny Tompo antsika mba hitondrana amam-bavaka ny asa anirahany antsika sy ho fanohanana amin’ny alalan’ ny Rakitra . Koa aoka hataontsika ho zava-dehibe izany . Misaotra antsika Sekoly Alahady isam-pitandremana nandrotsaka Rakitra taona 2017 . Isaorana ihany koa isika Sampana Sekoly Alahady Synodamparitany tamin’ny adidy iombonana nataontsika .
Faly misaotra an’ Andriamanitra isika fa mandroso tsara araka izay nampijoroana azy ny Sekoly Alahady manomana mpampianatra (SAMM). Efa marobe ireo mpampianatra Sekoly Alahady nahavita fianarana navoaka tany amin’ny Synodamparitany .Ampirisihana hatrany izy ireny mba hazoto hanohy ny fianarana araka ny fanekena natao tamin’ny fotoana famoahana sy fanirahana . Entanina hatrany koa anefa isika rehetra mahatsiaro fa nantsoin’ny Tompo hanao ny asa fanompoana maha- mpampianatra Sekoly Alahady mba hiditra hianatra ao amin’ny SAMM any amin’ny Synodamparitany misy antsika . Tsarovy fa tena mahasoa antsika sy ny hahafahantsika mandroso hatrany amin’ny asa fanompoana ny fianarana any aminn’y SAMM.
Ireto misy hafatra manokana ho antsika
Mahakasika ny tetikasa Ankadiefajoro dia efa tafajoro sy miasa ny komity. Tsarovy am-bavaka ny komity sy ny asa kasaintsika atao . Efa fikasantsika hatry ny ela mantsy ny hanangana ivo-toerana ho antsika Sampana Sekoly Alahady.Tohizo indray ny fanatanterahantsika Sampana Sekoly Alahady « anjara biriky » ho entina manatanteraka ny asa. Marihina fa hafa ny Rakitra ataontsika rehefa Alahadin’ny Sampana Sekoly Alahady Volana Desambra toy izao dia entintsika manao ny sahan’asa ankapoben’ny sampana Sekoly Alahady . Ezaka manokana ataontsika any amin’ny isam-pitandremana sy synodamparitany kosa ny anjara biriky ho aminn’y fananganana ivon-toerana eny Ankadiefajoro.
Ny Fihaonamben’ny Mpampianatra Sekoly Alahady FJKM dia hotanterahina ny 24-26 Aprily 2019 any Ambatolampy (SP Atsinanan’ Ankarattra Fahazavana) fa tsy any Miarinarivo araka ny efa fantatsika . Noraisina izao fanapahankevitra izao rehefa nifampidinika tamin’ny Prezidà Synodaly sy ny Biraon’ny Sampana Sekoly Alahady SP Miarinarivo Fahazavana izahay Biraon’ny Sampana Sekoly Alahady. Entanina isika mpampianatra Sekoly Alahady rehetra hiatrika izany .
Fotoam-panavaozana ny taona 2019. Hanavao ireo tomponandraikitra isan’ambaratongany eo anivon’ny SP sy Fitandremana ary ny Foibe isika . Hiatrika izany isika Sampana Sekoly Alahady no fanavaozantsika hatrany ny fanolorantenantsika ho amin’ny fanompana ny Tompo .
« Manao veloma anareo rehetra . Ho amin’ny fanahinareo anie ny fahasoavan’i Jesoa Tompontsika » . Filemona 23.25
Rakotondrasoa Harijaona Andriatsarafara , Mpitandrina
Mpitantsoratry ny fivoriana